कृपया हाम्रो सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्
हामी सकेसम्म चाँडो फिर्ता रिपोर्ट गर्नेछौं!
सीधा प्रश्न र अधिक जानकारी को लागी तपाइँले हामीलाई यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ:
ल्याण्डलाइन: + 49 2131 4058 629
हामी हाम्रो मुख्यालय मा मानव अधिकार र कलात्मक स्वतन्त्रता को रक्षा।
के तपाइँ हाम्रो काम संग एक समस्या छ? त्यसपछि बर्लिन मा हामीलाई भ्रमण गर्नुहोस्।
Gardeschützenweg 71 - 101, 12203 बर्लिन
ई - मेल ठेगाना (आवश्यक)
PixelHELPER फाउंडेशन | जर्मनी मा Wannsee बर्लिन मा प्लास्टिक कला
हामी एक राम्रो संसारको लागि लड्न सक्छौं
PixelHELPER मा तपाईंको रुचिको लागि धन्यवाद। मानवताको रोबोट तपाईंको भ्रमणको लागि धन्यवाद। हाम्रा कलाकारहरू द्वारा ठूलो दाताहरूको लागि हाम्रो4मीटर रोबोटहरू सिर्जना गरिएका छन्। यदि तपाईंले हामीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने तपाईंले उपहारको रूपमा रोबोट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ठूला मूर्तिकलाहरू कलाको वास्तविक कामहरू हुन्। Papier-mâché बाट बनेको ठूलो प्लास्टिकको रूपमा, तपाईं कुनै पनि कार्यालयको ढोका, व्यापार मेला वा कम्पनी बालबालिकामा फिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यदि तपाइँसँग हामीलाई बताउन केही विशेष छ भने, वा हाम्रो संगठनमा दान गर्न चाहन्छौं, हामी तपाईंलाई हाम्रो कामको सम्भावना देखाउनको लागि तत्पर छौं। लाइट कलाकार ओलिभर बिएनकोओस्कि र उनको टोलीले बच्चाहरूलाई हँसिलो र अचम्मको लागी4मीटर लामो ठूलो मूर्तिकला बनायो। हाम्रो यूट्यूब स्टार जोर्ग स्प्रेवले एक फूल समुद्र तट बल बिल्लपल्ट बनायो। मूर्तिकलाबाट सबै आय हाम्रो धर्मार्थ संगठनमा जान्छ। हाम्रो सहयोगको लागि धन्यबाद।
संपर्क अगस्ट 20th, 2021Oliver Bienkowski